8 Ihe Dị Mkpa Banyere ITIL Certification Course - ITS Tech School
2016 Windows Server Windows
Agụmakwụkwọ Digital Marketing
8 Ihe Dị Mkpa Ị Ga-ama Banyere IT N'ezie
The ITIL (Ụlọ Ahịa Akụ Ihe Ọmụma Ihe ọmụma) bụ ọkọlọtọ nke akọwapụtara IT Management Management. ITIL na-eduzi ndị ọrụ IT ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ n'akụkụ ha ma na-echekwa ha ka ha wee nwee ike ịkwado ụwa a. Ntube a, nke e weghachitere na 2011, gụnyere usoro a nakweere maka ụlọ ọrụ IT.
ITIL anọwo ebe a kemgbe 1980, karịa karịa ndị òtù 10,000 na-agbaso eriri ọrụ ITIL iji mekwuo mmezu ndị ahịa. Iwu ITIL dị oke mkpa iji nyochaa usoro ọrụ IT. Tupu ịkwaga na ITIL Agụmakwụkwọ ma ọ bụ nkwenye, ị kwesịrị ịma ihe ndị dị n'okpuru ITIL:
1. ITIL maka ndokwa nchịkọta:
Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na njikwa ọrụ dị oke mkpa maka mmepe ya. ITIL na-ebu usoro a kwadoro maka ọganihu na mkpochapụ ọrụ nlekọta IT. Ịgbaso ITIL na-eme ka ndị mmekọ IT na-efu ego, rụọ ọrụ mmepe, na ịkwa mma. Ulo oru maka ndi otu IT na-acho aka na nti. N'ebe ahụ mgbe ụlọ ọrụ IT na-akpachapụ anya mgbe iwu ITIL gasịrị, ọ nwere ike ịhazigharị ebumnuche ma mezuo ha n'ụzọ dị mma.
2. ITIL Agụmakwụkwọ:
Usoro ITIL gụnyere ntinye n'okpuru:
Ntughari okwu na ITIL
Atụmatụ imezu nlekota oru
ICT Njikọ Akuku
Ejighị arụ ọrụ
Modul ndị a na-ekpuchi akụkụ ọ bụla nke ọrụ nlekọta ọrụ nke otu ụlọọrụ IT ga-ewere mgbe ọ kwadoro ọrụ ndị ka mma.
3. Dezie usoro ITIL:
Mgbe ị na-eme atụmatụ iwepụta akwụkwọ nyocha ITIL, ịnwere ike ịgbanwe usoro gị dị ka egosipụtara site na mkpa gị na ngbanwe gị. Akụkụ gị nwere ike ọ gaghị agụnye nlekọta nchedo ka i wee zere ya.
4. Enweghị ụgwọ ndị òtù:
Maka ITIL, enweghi ezigbo ihe mere ị ga - eji nweta enyemaka na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ị nwere ike iwepụta ITIL ma ọ bụ Iwu ITIL na-enweghị atụgharị n'ime akụkụ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ ntinye aha na mkpakọrịta ọ bụla.
5. Ngwa ITIL bụ Ngwá Ọrụ-Onwe:
ITIL enweghị ngwá ọrụ ọ bụla; nyere ya ka a ghazie ime ya n'egbughị oge maka obere mkpakọrịta. N'ikpeazụ, ọ na-egbochi ụgwọ nke ngwaọrụ maka gị. Na ederede, ị nwere ike imeri ihe ọ bụla data gị. Ọ bụrụ na ị bụ mkpakọrịta na-aga n'ihu, ịnwere ike ịchọ ngwá ọrụ ole na ole.
6. Isi mmalite Ntuziaka ITIL:
Ntọala ntọala na-enye gị nghọta nke okwu ndị dị mkpa ma nwee ihe mmụta dị mkpa. Ị ga-anọdụ ala maka Foundation ITIL Nyocha akwụkwọ nyocha.
Ọkwa ọkachamara na-enye gị nghọta na ezi ngosi ITIL. N'uzo Ọkwa ahụ bụ ọkwa ka ukwuu nke itinye n'ọrụ.
Nchịkwa nchịkwa na-enye gị ihe ọmụma maka ọkachamara. Nke a bụ maka ndị ahụ, ga-elekọta nlekọta ọrụ ITIL.
7. ITIL abụghị otu ihe dị ka Management Management
Gbalịa ka ị ghara ịgbagha njikwa ọrụ maka ITIL. ITIL dị ịrịba ama maka nnyefe dị mma nke ọrụ e bulite ọrụ njedebe.
8. Oge nyocha
Inyocha ITIL bụ mkpebi dịgasị iche iche nke dị mkpa ka ị rụchaa ule ahụ n'ogologo awa. Ị ghaghị imecha nyocha 40 dị iche iche na oge ahụ.
ITIL Framework na-adabere n'ụzọ dị mfe na Usoro ọrụ, atụmatụ, mgbanwe, Ọrụ, na Ịmalite Ịrụ Ọrụ Ọrụ. Ọ na-agụnye iberibe dị iche iche dịka Njikwa Ihe Ọmụma, Ndozigharị nchịkwa, Njikwa Nwepụta, Ntube Nsogbu, Nchịkwa Ihe, Ngwọta Nsogbu, Nlekọta Nlekọta Ọrụ na ọtụtụ ihe ọzọ. Otu n'ime usoro ndị a na-edepụta usoro ọrụ nke ụlọ ọrụ IT maka ọrụ ndị ka mma. Ntuziaka ITIL ma ọ bụ ITIL ga-enyere gị aka ịghọta ma mechaa omume ndị ka mma.
Ị nwere ike ịchọta ọpụpụ: - Kedu ihe bụ ITIL certific? Ònye ga-erite uru site na asambodo ITIL®?
ITIL dị nnọọ ngbanwe na ojiji. Mkpakọrịta gị anaghị achọ usoro niile eji eme ihe. Ị nwere ike ịtụgharị uche na ya na nkebi oge. ITIL bụ ndokwa maka ịbịaru nso na omume kachasị mma nke na-enye gị ike ịnye ọrụ mmanye na mmefu ego. Ọ bụ ihe atụ ị ga-ewere mgbe ọ kwusịrị mgbasa ozi maka ọrụ nnyefe ọrụ IT. Kedu ihe ọzọ, onye ọ bụla chọrọ nke ahụ (ma mesịa, ha chọrọ gị.)
Na-enye ITIL Foundation Training 16th Sept. - 17th Sept.
Ọdịnihu nke arụmọrụ E-Business Suite na Mwelite Mmasị na afọ ndị na-abịanụ
Nkume a-aza Kagbuo aza
Uru nke akwụkwọ ITIL na ihe kpatara eji achọọ ITIL?
Ihe na10 Jul 2018
Ịghọta Microsoft Dynamics 365
Ihe na22 Jun 2018
Ịchọ ndị ọkachamara na Cyber ​​Security na 2018
Ihe na19 Jun 2018
DevOps - Ọdịnihu nke ụlọ ọrụ Ịntanetị
Ihe na15 Jun 2018
Kedu ka CCNA si dị mkpa? Kedu ihe anyị kwesịrị ịma banyere CCNA?
Ihe na14 Jun 2018